Vola tokony hiditra amin’ny fanjakana ireny vola very sy angalarina rehetra ireny. Trano, fiara, fitaovana sarobidy maro ireny ka raha giazana sy amidy dia volabe ho an’ny fanjakana. Fanakanana sahady ireo izay te hanao ratsy rehetra aty aoriana ny fisian’io lalàna io. Misy ireo manahy hoe ho ohatry ny resaka HCJ sy fitsarana manokana momba ny hazo sarobidy indray ve? Ny iriana, hoy hatrany izy, dia tsy ho fafy lainga no atao fa apetraka hoe tsy hisy fanavahana an’iza na iza ny fitsarana ao anatiny ao fa tena hiasa araka ny tokony ho izy tokoa. Saropady io lalàna io ary iriako ho azo ampiharina na dia amin’ny heloka vita tany aloha aza (effet retroactif). Tsy tokony hisy intsony ny ambonin’ny lalàna na mpitondra na tsia, eny, hatramin’ny vahiny, hoy hatrany izy. Ho an’ny mpahay lalàna iraisampirenena, Arlette Ramaroson, kosa moa dia mirary izy ny mba tsy hisy mizana tsindrian’ila ao anatin’izany. Mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC sy ny filoham-pirenena moa ny fahafahana mampihatra ity lalàna ity.